Lozam-pifamoivoizana – Ambatolampy : 4X4 nivadika, mpivady sy lehilahy iray namoy ny ainy | NewsMada
Lozam-pifamoivoizana – Ambatolampy : 4X4 nivadika, mpivady sy lehilahy iray namoy ny ainy
Nahatsiravina ity lozam-pifamoivoizana nitranga tany Ambatolampy, ny faran’ny herinandro teo ity. Voalazan’ireo nahita fa ny fandehanana mafy loatra no nampivadika ity fiara 4X4 iray niharan-doza. Olona telo, misy mpivady no indray namoy ny ainy.
Tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany hariva teo ho eo no nitranga ny loza. Nivadika ambony ambany izy io ary nahafaty olona telo vokatr’izany. Mpivady ny iray ary lehilahy iray ny fahatelo namoy ny ainy. Ny iray maty teo no ho eo, maty teny an-dalana ilay ramatoa, ary ny lehilahy fahatelo, tsy tana ny ainy rehefa tonga teny amin’ny hopitaly.
Mafy ny fahavoazana satria nosokirina tao anaty fiara mihitsy ny olona sasany vao tafavoaka. Voaterin’ny varavarana ny lehilahy iray ary nitarika ny fahafatesany mihitsy izany. Naratra kosa ny mpamily vokatr’ity loza ity, ary efa notazonin’ny zandary.
Nilaza ny olona tany an-toerana fa nandeha mafy ity fiara 4×4 ity ka izay no nahatonga ny loza. Somary nalama ny lalana ka tsy nahatana familiana ny mpamily. Fiara avy tany atsimo any izy io ary hiakatra aty an-dRenivohitra kanjo niharan-doza.
“Mafy ny fandehanany, ary hitanay ny fitrangan’ny loza. Niezaka namonjy avy hatrany ny olona tety amin’ny manodidina ary fiara nosakanana nitondra ireo naratra tany amin’ny hopitaly ny fiara iray handeha hiakatra”, hoy ny fanazavan’ny olona nahita maso ity loza ity.
Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fizahana sy ny famotorana. Notanana avy hatrany ilay mpamily.
Isan-taona, misy hatrany ny loza mahatsiravina mitranga amin’iny lalam-pirenena fahafito iny. Matetika, eo anelanelan’Ambatolampy sy Ambohimandroso izany. Fandehanana mafy mazàna, ny fototry ny loza, noho iny lalana iny malalaka sy lavalava, ka mahatonga ny fiara handeha mafy. Anisan’ny maty tamin’iny lalana iny ilay mpanakanto Om-Gui.
Torak’izany koa ny any amin’ny lalam-pirenena fahefatra, izay miverimberina ny eo Ankazobe. Tsy mandray lesona amin’ny fitandremana amin’ny familiana ny mpamily. Sarotra ho an’ny mpitandro filaminana rahateo ny hametra ny fandehanana mafy ny fiara. Miankina amin’ny fahatsiarovan-tenan’ny mpamily sisa hisorohana ny loza.